DMC-FZ300GA Lumix Digital Camera - Panasonic
LUMIX Digital Camera DMC-FZ300GA
ဘက်စုံသုံး Bridge ကင်မရာ
အကြမ်းခံသောဒီဇိုင်းရှိသည့် ဤကင်မရာကို အပြင်သို့ ယူသွားပါ။ 4Kဗီဒီယို/ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးနိုင်စွမ်းများသည 600mm/F2.8် သင့်အား အပြည့်အဝ စိတ်ကျေနပ်စေမည်ဖြစ်ပြီး တဒင်္ဂအတွင်းရိုက်ကူးရမည့် ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း အတွေ့အကြုံများကို သေချာပေါက် ရိုက်ကူးနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
Full-Range F2.8 နှင့်ဖြစ်သော 25-600mm Zoom
25-600mm LEICA DC VARIO-ELMARIT lens သည် full-range F2.8 ရှိခြင်းကို ဂုဏ်ယူပါတယ်။ သင်ရိုက်ကူးမည့် အရာဝတ္ထုသည် မည်မျှလောက်ဝေးနေသည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် မည်မျှလောက် မြန်မြန်ရွေ့နေသည်ဖြစ်စေ သင်အနေဖြင့် ထိုအရာဝတ္ထုကို သေချာပေါက် ရိုက်ကူးနိုင်စေပါသည်။ F2.8 ပုံသေ ရရှိနိုင်စွမ်းဟာ အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးတစ်လျှောက် အလင်းရောင်နည်းသော အချိန်များတွင် ရိုက်ကူးနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
ထို့ပြင် Panasonic ၏ black box Nano Surface Coating နည်းပညာသည် အလွန်အမင်းနည်းသော reflectance ကို ဂုဏ်ယူပြီး flaring နှင့် ghosting ကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသော ပြတ်သားမှုရှိသည့် ထူးထူးခြားခြား အလင်းစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် LUMIX FZ300 တွင် ထိုနည်းပညာကို အသုံးချမည်ဖြစ်ပါသည်။
• 35mm နှင့် ညီမျှသော - 25-600mm
Venus Engine နှင့် ပေါင်းစည်းထားသော 12.1-megapixel High Sensitivity MOS Sensor သည် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းနှင့် အရည်အသွေးမြင့် ဆစ်ဂနယ်ထုတ်လွှတ်ခြင်းအား ထောက်ပံ့ပါသည်။ အဆင့်မြင့် ဆူညံသံလျှော့ချသည့် နည်းပညာသည် ISO 6400 ထိရှိသော အလင်းရောင်နည်းသည့် အခြေအနေများတွင်ပါ ပြတ်သားသော ဓာတ်ပုံများကို ပေးနိုင်ပါသည်။
Venus Engine သည် သေးငယ်သော အလင်းဝင်ပေါက်တစ်ခုနှင့် ရိုက်ချိန်တွင်ပင် ဓာတ်ပုံအား ပြတ်သားပြီး ထင်ရှားသည့် ဓာတ်ပုံများကို ပြုလုပ်ရန်အတွက် ရောင်စဉ်များအား ပြန်ထေခြင်းများတွင် ကျွမ်းကျင်ပါသည်။
5-Axis HYBRID O.I.S.+ (Optical Image Stabilizer)သည် သင့်အား မှုန်ဝါးမှုနည်းဝါးသည့် လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းကို ပေးပါသည်။ ၄င်းသည့် ကင်မရာ၏ လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစား5ခုဖြစ်သည့် horizontal, vertical, axis of rotation, vertical rotation နှင့် horizontal rotation ကို အာရုံခံပြီး ၄င်းတို့အတွက် ပြန်ထေပေးပါသည်။ The Level Shot ဆောင်ရွက်ချက်ဟာ ရုပ်ပုံရဲ့ အလျားလိုက်လိုင်းတွေကို အာရုံခံပြီး ကင်မရာစောင်းသွားလျှင်ပင် ထိုလိုင်းတွေကို ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ အပေါ်မှ ရိုက်ကူးခြင်း blind recording အခြေအနေများတွင်ပင် တည်ငြိမ်တဲ့ ဗီဒီယိုကို ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။
* 5-Axis HYBRID O.I.S. သည် 4K ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းမှ လွဲ၍ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းများ အတွက် အလုပ်လုပ်ပါသည်။
4K ဗီဒိယိုနှင့် 4K ဓာတ်ပုံ —
ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ အခိုက်အတန့်ကို ရိုက်ကူးလိုက်ပါ။
သင်မှတ်သားလိုသော အထူးအခိုက်အတန့်များသည် အချိန်တိုင်းတွင် ရှိနေနိုင်ပြီး အကောင်းဆုံး resolution ဖြင့် ရိုက်ကူးသင့်ပါသည်။ အခုဆိုရင် Panasonic ရဲ့ 4K နည်းပညာကို လူတိုင်းအတွက် ရရှိနိုင်ပါပြီ။ အသစ်ကို မိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့အတူ သင့်အနေ LUMIX FZ300 ဖြင့် ဗီဒီယိုများကိုဖြင့် အထိ မှတ်တမ်းတင်နိုင်မည်ဖြစ်သည(QFHD: 3840 x 2160 pixels, 25 fps, 100Mbit/s)်။
ထို့ပြင် 4K ဓာတ်ပုံ feature ဖြင့် ကင်မရာရှိ 4K video (30 ဖရိမ် / photos per second) အစဉ်လိုက်မှ အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံကို ထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 8-megapixel နှင့် ညီမျှသော ရုပ်ငြိမ်ဓာတ်ပုံအဖြစ် သိမ်းဆည်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
LUMIX FZ300 သည် ဗီဒီယိုရောဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းအတွက်ပါ အထူးအသုံးဝင်ပါသည်။
4K ဓာတ်ပုံ အနေအထား — လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖန်တီးပါ
4K Photo function သည် အနေအထားသုံးခုဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီး မြင့်မားသော တစ်စက္ကန့်လျှင် 30 ဖရိန် / photo ဆက်တိုက်ရိုက်သည့်နှုန်းဖြင့် အကောင်းဆုံး အခိုက်အတန့်ကို ရိုက်ကူးစေနိုင်ပါသည်။
၄င်းသည် ဓာတ်ပုံဆက်တိုက်ရိုက်သည့် အနေအထားကဲ့သို့ ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်စေသည့် function ဖြစ်ပါသည်။ Shutter ခလုတ်အား နှိပ်သည်နှင့် ကင်မရာသည် 8-megapixel နှင့်ညီမျှသော ဓာတ်ပုံများကို အလွန်အမင်းလျှင်မြန်သည့် ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးသည့်နှုန်းဖြင့် ရိုက်ကူးနေမည်ဖြစ်သည်။
ဤ function သည် 4K ဗီဒီယိုများကို ရိုက်ကူးသည့် စံ 4K Photo function ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် 8-megapixel နှင့်ညီမျှသော မည်သည့် ဖရိန် / photo မဆို ပြန်လည်ထုတ်နိုင်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် နားနားနေနေ နေပြီး ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အခိုက်အတန့်များကို စောင့်ဆိုင်းနိုင်ပါသည်။
4K Pre-Burst’ အနေအထား၏ ထူးခြားချက်မှာ Shutter ခလုတ်အား မနှိပ်ခင် တစ်စက္ကန့်နဲ့ နှိပ်ပြီးတစ်စက္ကန့်တွင် 4K ဗီဒီယို ရိုက်ကူးနေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာက သင်မရိုက်သေးခင်အချိန်ထက် ပိုမိုမြန်သော အချိန်မှာဖြစ်သွားမည့် မမျှော်လင့်နိုင်သော အခိုက်အတန့်တစ်ခုအား ရိုက်ကူးနိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးပုံများ ရွေးချယ်ရန်အတွက် ပုံ60 အပိုရရှိနိုင်ပါသည်။
4K ဗီဒီယို — Full HD ထက် ပိုမိုအသေးစိတ် ရရှိနိုင်ပါသည်
ရုပ်ရှင်ကြည့်နေသည်ဖြစ်စေ ဗီဒီယိုများကို တည်းဖြတ်နေသည်ဖြစ်စေ 4Kသည် သင်ကြည့်ဖူးသည်ထက် အများကြီး ပိုမိုလေးနက်တဲသော အတွေ့အကြုံအား ပေးပါသည်။ ၄င်း၏ ပင်ကိုအနေအထားဖြစ်သော 3,840 x 2,160 pixels ရှိသည့် resolution သည် Full HD ထက် လေးဆပိုမိုကြီးမားပြီး ပိုမိုမြင့်မားသော အသေးစိတ်ဖော်ပြနိုင်မှု အနေအထား ရရှိစေပါသည်။ 4K နှင့် ရိုက်ထားသောဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းများကို Full HD TV သို့ ထုတ်လျှင်ပင် Full HD ဗီဒီယိုဖိုင်များသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့် ပိုမိုပြတ်သားသော အသေးစိတ်မှု ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရေ/ဖုန်မဝင်သော အကြမ်းခံသည့် ဒီဇိုင်း
ပြင်ပတွင် အလွန်အမင်းအသုံးပြုလျှင်ပင် ခံနိုင်ရည်ရှိလောက်အောင် အကြမ်းခံစေရန်အတွက် LUMIX FZ300 တွင် ရေ/ဖုန်မဝင်သော အကြမ်းခံသည့် ဒီဇိုင်း ရှိပါသည်။ အထင်ကရဖြစ်သော DSLM (Digital Single Lens Mirrorless) ကင်မရာများ၏ တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးစံနှုန်းစစ်ဆေးမှုကို အောင်မြင်စေရန်အတွက် ၄င်းတွင် ဆက်ထားသည့်နေရာတိုင်း၊ ဒိုင်ခွက်တိုင်းနှင့် ခလုတ်တိုင်းတွင် ဆီးလ်ပိတ်ထားပါသည်။ ဗွက်ပေါက်တဲ့တောအုပ်တွေကနေ လေထန်တဲ့ သဲကန္တာရတွေအထိ ပြင်းထန်တဲ့ ရာသီဥတုအခြေအနေတွေမှာ ပြင်ပဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းအတွက် LUMIX FZ300 ကို ယူဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။
LUMIX FZ300 တွင် resolution မြင့်မားသော (1,440k-dot) OLED Live View Finder ပါပြီး ကောင်းမွန်သောမြင်ကွင်းကို ရရှိစေနိုင်ကာ နေရောင်တိုက်ရိုက်ထိနေလျှင်ပင် 10,000:1 ထင်းကနဲမြင်သာမှုနှင့် ပြည့်စုံကောင်းမွန်သော ဖရိန်ကို ရရှိစေပါသည်။ 0.7x အကြီးချဲ့ခြင်း (35mm ကင်မရာနှင့် ညီမျှသည်) သည် ဓာတ်ပုံများကို အသေးစိတ်မြင်ရရန် လွယ်ကူစေပါသည်။ သင်မျက်လုံးရှေ့တည့်တည့်တွင် ဆက်တင်များအား ဖော်ပြထားခြင်းနှင့်အတူ သင့်ဓာတ်ပုံများသည် သင်မြင်စေလိုသည့်အတိုင်း အမြဲတမ်း တိတိကျကျထွက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။
3.0-လက်မ အပေါ်တည့်တည့်မှ မြင်ရသော အနောက်ဘက် Touch Panel
ခန့်မှန်းခြေ 1,040k-dot LCD ရှိသည့် မြင့်မားသော resolution သည် နေသာသော ပြင်ပရိုက်ကူးခြင်းများအတွက် မြင့်မားစွာ မြင်နိုင်စွမ်းကို ရရှိစေပါသည်။ စောင်းခြင်း/ဆုံလည်လှည့်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ခြင်းသည် လွယ်ကူသော ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံအား အပြည့်အဝထိန်းချုပ်မှုကို ပြုလုပ်နေစဉ် တစ်မူထူးခြားသောရှုထောင့်များကို ရှာဖွေနိုင်ရန် လွတ်လပ်မှုကို ပေးပါသည်။ ထို့အပြင် သင်ချိန်ညှိလိုသည့်အရာကို မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် နှိပ်၍ ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် ချက်ချင်း ချိန်ညှိထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး Shutter လည်း ထုတ်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
LUMIX FZ300 တွင် ခေတ်မီသောကိုယ်ထည်ရှိခြင်း၊ အံဝင်မှု၊ လက်ထဲတွင်မြဲစေသည့် ဆုပ်ကိုင်မှုအပြင် ၄င်းတွင် လုပ်ဆောင်ချက်အား အလိုလိုဆောင်ရွက်ခြင်းများကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ အနောက်ဘက်/ဘေးဘက် ဒိုင်ခွက်များသည် ယာယီ WB နှင့် ISO ချိန်ညှိချက်များကို ကိုင်တွယ်ရန် အဓိကအလင်းဝင်ပေါက်နှင့် Shutter အမြန်နှုန်း ချိန်ညှိချက်များကို ထိန်းချုပ်ပါသည်။ function ခလုတ်* လေးခုအား ဆက်တင် သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် မှန်ဘီလူး၏ ဘယ်ဘက်ရှိ ဘေးဘက်မောင်းတံသည် ညာဘက်လက်ဖြင့် Shutter ဆောင်ရွက်ချက်ကို အာရုံစိုက်နေစဉ်တွင် ပိုမိုညက်ညောစွာ zoom ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
* ကိုယ်ထည်ပေါ်ရှိ ခလုတ် လေးခုနှင့် မီနျူးရှိ ခလုတ် ငါးခု။
ပြောင်းလဲပြင်လွယ်သောအသုံးပြုမှုအား ပိုမိုရရှိစေရန်အတွက် LUMIX FZ300 အား DMW-FL580L ပြင်ပ Flash, DMW-MS2 Stereo/Shotgun Microphone, DMW-LT55 Tele ပြောင်းလဲခြင်း Lens, DMW-LC55 အနီးကပ် Lens နှင့် အခြားသော အပိုပစ္စည်းများဖြင့် ပေါင်းစည်းထားပါသည်။ LUMIX FZ300 ၏ တိုးချဲ့ထားသော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိခြင်းသည် အသုံးပြုနေကျ bridge ကင်မရာ၏ ကန့်သတ်ချက်ကို ကျော်လွန်သွားပါသည်။
နှင့်အတူ မြန်နှုန်းမြင့်အလိုအလျှောက် focus ပြုလုပ်ခြင်း
Panasonic ၏ Depth From Defocus (DFD) Auto Focus (AF) နည်းပညာ၏ ကျေးဇူးဖြင့် လျှင်မြန်စွာရွေ့လျားသော အရာဝတ္ထုများကိုပင် ရိုက်ကူးလိုက်ပါ။ LUMIX FZ300 တွင် frame အတွင်းရှိ အရာဝတ္ထုများကြား အကွာအဝေးကို ချက်ချင်းတွက်ချက်ပြီး lens ၏ focus အား လျှင်မြန်သည့် ဆက်တိုက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတည်းဖြင့် ရရှိစေသည့် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ ပါဝင်ပါသည်။ AF မြန်နှုန်း စနစ်သစ်သည် 0.09 စက္ကန့်*ထိ မြန်၍ Burst ရိုက်ချက်သည် တစ်စက္ကန့်လျှင် ဖရိန်6ခုစာ AFC ဖြင့် မြန်နှုန်းမြင့်လာပါသည်။ ၄င်းသည် ဗီဒီယို ရိုက်ကူးစဉ်တွင်လည်း ဆက်တိုက် focus ပြုလုပ်ခြင်း၏ တည်ငြိမ်မှုကို တိုးမြှင့်စေပါသည်။
* CIPA စံနှုန်းများ Live View Finder ကို အသုံးပြုချိန်
12 fps ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးခြင်း
မြန်နှုန်းမြင့် ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးခြင်းများအား 12.1-megapixel full resolution ဖြင့် 12 fps တွင် ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။ ခန့်မှန်းခြေ 0.88 sec ရှိသော လျှင်မြန်စွာ စတင်နိုင်ခြင်းနဲ့အတူ မှန်ဘီလူးထွက်သည့်အချိန်တိုခြင်းကြောင့်LUMIX FZ300 မှ သင့်အား တဒင်္ဂအတွင်းရိုက်ရမည့် အခွင့်အရေးများကို သေချာပေါက် ရိုက်နိုင်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
အနီးကပ် Macro ရိုက်ကူးခြင်း
LUMIX FZ300 ဖြင့် အနည်းဆုံး focus အကွာအဝေး 1cm ရှိသော အနီးကပ် Macro ရိုက်ချက်များအား ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။
Wi-Fi® ကြောင့် သင်၏ ဖန်တီးမှုများအတွက် ကြိုးတပ်ပြီး အသုံးပြုစရာမလိုတော့ပါ။
၏ ချိတ်ဆက်မှု အင်္ဂါရပ်များသည် LUMIX FZ300 ကင်မရာ၏ အသုံးပြုနိုင်စွမ်းကို နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် တိုးချဲ့စေနိုင်ပါသည်။
ကင်မရာအား သင့်ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလတ်ပေါ်တွင်ရှိသော ‘Panasonic Image App’ ဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ဓာတ်ပုံကြည့်ရှုခြင်း၊foucs ပြုလုပ်ခြင်း၊ Shutter အား အကွာအဝေးတစ်နေရာမှ ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် သင့်တက်ဘလတ်၏ ကြီးမားသော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဓာတ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။ သို့မဟုတ် လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် သင့်ဓာတ်ပုံများ ဝေမျှခြင်းပင်ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။
သင့်စမတ်ဖုန်း/တက်ဘလတ်ပေါ်တွင် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်၏ အနှစ်သက်ဆုံးအခိုက်အတန့်များအား ဆွဲယူပြီးလွှတ်ချခြင်းဖြင့် လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် လွယ်ကူစွာဝေမျှနိုင်ပါပြီ။
LUMIX FZ300 သည် သင့်စမတ်ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလတ်၏ GPS အဝင်အထွက်စာရင်း/တွဲဖက်ခြင်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသလဲဆိုတာကို အတိအကျသိနိုင်ပါသည်။ သင့်ဓာတ်ပုံများအား တည်နေရာတွဲတင်ခြင်းဖြင့် ဓာတ်ပုံအားရိုက်ခဲ့သည့်နေရာ၏ အချက်အလက်အား အလိုအလျှောက်တွဲပြီးသား ဖြစ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
LUMIX FZ300 သည် အောက်ပါ ဆက်တင်များကို ချိန်ညှိရန်အတွက် ကင်မရာအတွင်းတွင် RAW-format ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Colour Space Setting (sRGB / AdobeRGB), White Balance, Exposure Compensation, Photo Style, Intelligent D-range Control, Contrast, Highlight / Shadow, Saturation, Noise Reduction, Intelligent Resolution, Sharpness.
Filter အထူးပြုလုပ်ချက်များစွာဖြင့် ဖန်တီးထိန်းချုပ်မှုက သင့်အား ဓာတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများမှာ အနုပညာအရည်အသွေးနှင့် မူလခံစားမှုရသကို ထည့်သွင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဖန်တီး Panorama function က ကင်မရာအား တစ်ဖက်ဖက်ကိုလှည့်ခြင်းဖြင့် ရွေ့လျားနေသော panorama ဓာတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးစေနိုင်ပါသည်။ စံ (ယိုယွင်းမှု အနည်းဆုံး) ' သို့မဟုတ် 'အကျယ် (အများဆုံး မြင်ကွင်းထောင့်) ' ကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
HD ရှိသော မြန်နှုန်းမြင့်ဗီဒီယို
သင့်အနေဖြင့် မြန်နှုန်းမြင့် ဗီဒီယိုများအား full-HD အရည်အသွေးဖြင့် 100 fps*တွင် သို့မဟုတ် VGA အရည်အသွေးဖြင့် 200fps တွင် ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် ပကထိမျက်စိဖြင့် မမြင်ရသော မြင်ကွင်းများကို ရိုက်ကူးနိုင်ပြီး ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းဆန်သော နှေးကွေးသည့် လှုပ်ရှားမှုအနေဖြင့် ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
* ရိုက်ကုရေး format သည် 25p ဖြစ်ပါသည်။
Bence Máté ရိုက်ကူးသော "သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏ ကောင်းချီးပေးခံထားရသော သဘာဝတရား" Panasonic LUMIX FZ300 4K ဗီဒီယို
Bence Máté ၏ Panasonic LUMIX FZ300 ရိုက်ကူးခြင်းနှင့် ပတ်သတ်သည့် သဘောထား
Full-range F2.8 အလင်းဝင်ပေါက် ပါဝင်သည့် မျိုးစပ်ကင်မရာအသစ် Panasonic LUMIX DMC-FZ300 အား မိတ်ဆက်ခြင်း